Qiimaha Mobile - BBC Somali
BBC lacag kuma dalacdo adeegsiga adeegeeda ee telefoonada gacanta. Shirkadda telefoonkaaga ayaa kugu soo dalici karta qarash. Shirkadaha waxaa laga yaabaa in ay kuu xisaabiyaan muddada aad internet-ka isticmaashay iyo xogta aad soo dajisay.
Tusaale ahan, hadii shirkadda ay kugu soo dalacdo ilaa £2 xogta MB ee kasta ee aad dajiso, waxay kugu noqonaysaa ku dhowaad ilaa 1p in aad aqriso sadex bog oo sheeko wareed BBC-da ah. Fadlan kala tasho shirkadaada in aad ogaato sida ay lacagta u qaataan.
Hase yeeshee, waxaa jira dhowr siyood oo aad u xadidi karto qarashka adeegsiga telefoonka gacanta:
Qaado xogta isku xiran.
U rukummo bil bil ama maalinle qiime go'an iyo xog isku xiran oo aad hesho, waxay xadidaysaa qarashka bishii laguugu soo dalacco telefoonkaaga gacanta ama qodobada video-ga ah ee aad dajisato, gaar ahaan hadii adeegsigaagu uu sareeyo. La xiriir shirkadaada wixii faahfaahin dheer intaas.
Isticmaal Wi-Fi In sii kordhaysa oo ka mid ah telefoonada gacanta hadda way leeyihiin wi-fi oo ay ku soo degaan. Waad yarayn kartaa qiimaha xogta hadii aad BBC telefoonada gacanta habka u gasho, adigoo maraya isku xirka wireless-ka ee guriga ama goob leh wireless. Hadii aadan hubin in telefoonkaagu uu leeyahay wi-fi iyo in kale la xiriir warshadda soo saartay telefoonka aad adeegsato ama shirkada telefoonkaaga.
Isticmaal bluetoosh Qaar ka mid ah qodobada video-ga ee aad ka heli karto BBC telefoonada gacanta ma aha kuwo xiran oo qaab bluetooth ah waa loogu diri karaa telefoon kale- marka la wadaag saaxiibadaada.